Ngubani ophethe abalandeli bakho be-Twitter? | Martech Zone
Ngubani ophethe abalandeli bakho be-Twitter?
NgoLwesibini, nge-27 kaDisemba ngo-2011 NgoMgqibelo, Disemba 17, 2016 Douglas Karr
Iakhawunti ebangel 'umdla kwiNew York Times yendlela UPhonedog umangalela umsebenzi wangaphambili ukufumana ukufikelela kubalandeli be-Twitter kwiakhawunti ayimisileyo njengenxalenye yokufikelela kwabo kwimidiya yoluntu.
Ngokwimigangatho yengqesho yangoku elizweni, ndicinga ukuba i-PhoneDog igcwele kumalungelo abo… ngumnini yinkampani. Nangona kunjalo, imithombo yeendaba zentlalo inayo utshintshile umbono kunye nokusebenzisana phakathi kweenkampani kunye nenethiwekhi yazo. Kwakudla ngokuba abantu babekwazi ukuma emva kwegama lokunxibelelana nenethiwekhi. Sifunde ngentengiso, uphawu, iilogo, izilogeni kunye namanye amathuba enkxaso. Ingxaki kukuba amajelo asekuhlaleni ngoku abeka abantu phambi kwe inkampani kwaye ngokuthe ngqo ekunxibelelaneni nophawu. Inkolelo yam yobuqu kukuba, kuba imithombo yeendaba zentlalo itshintsha ukuhamba konxibelelwano, iipateni zobunini ziyaguquka ngokunjalo.
Ukujonga emva kuhlala kungama-20/20, kodwa kulula umgaqo-nkqubo weendaba zosasazo ngesele iyisekile ngaphambili. Ngelixa iPhonedog inokuthi iphumelele kwimfazwe esemthethweni yokuba ingaba eli nyathelo lelabo okanye hayi, inyani yokuba bengakhange babeke olu lindelo kumgaqo-nkqubo weendaba zosasazo ibiyimpazamo. Ngokoluvo lwam, ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba ityala labo alinaxabiso ngenxa yoku kuphela. Ndiyakholelwa ukuba kuhlala luxanduva lwenkampani ukuseta ulindelo kwingqesho nakubunini.
Kuba akukho mntu unebhola yomlingo, kuya kufuneka ucinge ngale nto kunye nabasebenzi bakho kwaye usete okulindelweyo:
Ukuba awufuni ukuba abasebenzi bakho benze njalo siqu abalandeli babo, unokubalawula kwaye unxibelelanise iakhawunti exhaswa liinkampani. Umzekelo: Endaweni yokuba nabasebenzi bethu balawule iiakhawunti zabo, sibanika ukufikelela kuzo @kwiedit kunye Hootsuite kwaye Bomgcini. Ndiqaphele ukuba abanye abantu baya kuba nesiphatho igama lenkampani, ngelixa elona gama kwiakhawunti lingabasebenzi. Ndiyakholelwa ukuba kuseta ulindelo kunye nabaphulaphuli kunye nenkampani engabanini beakhawunti.
Ndiqaphele ezinye iinkampani ezinokuthi abasebenzi bazo babhalise ku-Twitter ngesiphatho esidibeneyo kunye negama. Umzekelo, ukuba ndifuna ukuba umqeshwa ngamnye abe neakhawunti yomdibaniselwano… ndinokumisela @dk_doug, @dk_jenn, @dk_stephen, njl. lilandelayo lilandela iakhawunti ethi ekugqibeleni ishiywe!
Inketho yokugqibela, ngokoluvo lwam, yeyona ilungileyo. Vumela abasebenzi bakho ukuba bakhe inethiwekhi yabo kwaye bayigcine. Ndiyazi ukuba uyothuswe yile nto, kodwa ukuxhobisa abasebenzi bakho ukuba baphumelele kunamandla. Ndiyayithanda inyani yokuba UJenn kwaye Stefano Zombini zithetha rhoqo malunga DK New Media kwiiakhawunti zabo. Ukuba bakha oku kulandelayo kungakholelekiyo, ndiyijonga njengenzuzo yokuba nabo beqeshwe kunye nathi kwaye lixabiso elongezelelekileyo abalizisayo kwinkampani yam. Ikwaluxanduva lwam ukuqinisekisa ukuba bonwabile kwaye ndingabagcina apha!
Intlalontle iqala ngabantu, hayi inkampani. Abo balandeli babengengabo abalandeli bePhonogog… bawuxabisile umxholo owenziwe ngesandla UNowa Kravitz ikwazile ukuphuhlisa egameni lePhonogog. Ngelixa iPhonogog inokuba yayihlawule uNowa, yayingabalandeli beetalente zikaNowa.
Igama lam lokugqibela kule: Ndilithiyile igama siqu kwaye Bunini xa kuziwa kwiinkampani, abasebenzi kunye nabathengi. Andikholelwa ukuba inkampani ikhe ibe ngumqeshwa kwaye ayikhe ibe nabathengi. Umqeshwa urhwebo… sebenzela imali. Umthengi ukwarhweba… imveliso yemali. Umqeshwa okanye umthengi uhlala enelungelo lokushiya ngaphakathi kwemida yokubandakanyeka kwesivumelwano. Inkampani efana nePhonogog icinga ukuba siqu Abo balandeli banokunika bonke ubungqina emhlabeni ukuba kutheni belandela uNowa hayi iakhawunti yePhonedog.
tags: amaxesha e-york amatshahayi kravitzfonedogwa sukelaTwitterbalandeli be twitter
Ukuhlalutya i-Twitter yakho elandelayo
Iindlela eziPhezulu zeTekhnoloji zika-2011
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2011 ngo-11: 19 AM
Ndiyaxolisa kodwa kuphela "abanini" apha abalandeli.
Ngomhla wama-29 ku-Disemba 2011 ngo-12: 28 PM
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe, Jeff!